पीजीए टूर क्यू-स्कूल: योग्यता टूर्नामेंट
पीजीए टुर क्वालिटिङ टूर्नामेंट - क्यू-स्कूलको रूपमा राम्रो भनिन्छ - पहिलो 1965 मा खेलाडी र जॉन श्लेले पहिलो विजेता थिए; र अन्तिम 2012 मा खेलाडी, डन-हवान लीसँग विजेताको रूपमा। बीचमा, टूर्नामेंट वार्षिक रूपमा खेल्न सकिन्छ, 1 968-69 र 191975-81 मा खेल्ने दुई टूर्नामेंट (वसन्त र पतन) सँग।
प्रत्येक वर्ष, टूर्नामेंटले पीजीए टूर कार्डहरू कमाउने निश्चित संख्यामा गोल्फरहरू - सदस्यता लिने र निम्न पीजीए टुर मौसमको लागि टूरमा विशेषाधिकार खेल्छन्।
टूर्नामेंट पनि सम्मानित भयो, यसको अंतिम चरण मा, पीजीए टूर कार्ड कमाई मा विफल भएका प्रतिभागिहरु को Web.com टूर मा स्थिति।
तथापि, 2013 मा, "पीजीए टूर क्यू-स्कूल" अवस्थित छ किनकि टूर भ्रमण कार्ड पुरस्कार गर्न एक वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर सुरु भयो। एक योग्यता टूर्नामेंट अझै पनि खेल्दै छ, तर यो केवल Web.com टूर को लागि एक मार्ग प्रदान गर्दछ, पीजीए टूर छैन । पीजीए टूर कार्डहरू कमाउने नयाँ विधि Web.com Tour Finals , टूर्नामेंटहरूको एक श्रृंखला जसमा 50 पीजीए टूर कार्डहरू उपलब्ध छन्। पहिलो Web.com भ्रमण फाइनल सेप्टेम्बर 2013 मा भएको थियो।
पीजीए टुरमा हाम्रो प्राइमर हेर्नुहोस् सबै तरिकाका लागि योग्यता गोल्फर्सले अहिले भ्रमण स्थिति हासिल गर्न प्रयास गर्न सक्दछन्।
पीजीए टुर क्वालिटिङ टूर्नामेंट वास्तव मा टूर्नामेंट को एक श्रृंखला थियो, जो पहिलो चरण को क्वालिफायर संग संयुक्त राज्य भर को धेरै स्थानों मा खेले। पहिलो चरणमा ग्रेड बनाइएका गोल्फहरूले दोस्रो-चरण क्वालिफायरमा अग्रता लिएका छन्।
र गोल्फर्सलाई दोस्रो चरणको अग्रिम अगाडी अन्तिम चरणमा सारियो - छ-गोल गोल, जुन धेरै व्यक्तिहरूले "क्यू-स्कूल" उल्लेख गरे भनेर उल्लेख गरेका छन्।
केही गोल्फहरू पहिलो चरण छोड्न सक्षम थिए, र अरू पनि पनि दोस्रो चरणमा छन् भने, यदि उनीहरूले निश्चित मापदण्डहरू पूरा गरे (जस्तै पीजीए टूरमा सत्तारुढ स्थिति, वा विगतको चैंपियन)।
अन्तिम स्टेजमा स्ट्रोक प्लेको छानबिन पछाडि पछ्याउँदै, उच्चतम अन्त्यकर्ताहरूले निम्न वर्षको लागि पीजीए टुरमा पूर्ण छूट प्राप्त गरेका छन्। त्यो संख्या सामान्यतया कम 25 वा कम 30 अन्त्यमा, र सम्बन्ध सम्बन्धी थियो।
पीजीए टूर क्यू-स्कूल त्रिविया
क्यू-स्कूल मेडलिस्टहरू बीच, बेन क्रेन्साव सबै भन्दा पीजीए टूर टूर्नामेंट (1 9) जित्न सकिए।
क्रान्सा र फज्जी जोलरले क्यू-स्कूल मेडलस्टिस्टहरू बीचको दुईवटा प्रमुखहरू छन्, दुईजना।
Robin Freeman दुई भिन्न सातामा क्यू-स्क्यान मेडलस्टिस्ट मात्र एकमात्र गोल्फर हो।
पीजीए टूर क्यू-स्कूल मार्फत प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा सानो गोल्फर र उनको कमाई सियो वुम, जो 17 बर्षका थिए,5महिना पुरानो हुँदा "2012" को फाइनल-चरण क्वालिफायरबाट "स्नातकोत्तर" भयो।
पीजीए टूर क्यू-स्कूल विजेता
यहाँ प्रत्येक पीजीए टुर क्वालिटिङ टूर्नामेंटका लागि पदकहरु को सूची यहाँ खेलाडी छ:
2012 - दाङ-हवान ली
2011 - ब्रेंडन टोड
2010 - बिली मेयर
2009- ट्रय मेरिट
2008 - हैरिसन फ्रैजर
2007 - फ्रैंक लिकलिटर II
2006 - जर्ज मैकनेल
2004 - ब्रायन डेविस
2002 - जेफ ब्रेउट
2001 - पट पेरेज
2000 - स्टेफन एलन
1 999 - ब्ल्लेन मकल्यालस्टर
1998 - माइक वेयर
1997 - स्कट वर्पैंक
1996 - एलन ड्योल, जमी जॉनसन
1995 - कार्ल पाउलसन
1994 - वुडी अस्टिन
1993 - टाइ आर्मस्ट्रांग, डेभ स्टकटन जूनियर
, रोबिन फ्रीमैन
1992 - मामी कुरामाटो, स्किप केन्डल, ब्रेट ओगल, पेरी मास, नेले स्मिथ
1 99 1 - माइक स्टैंडर्ड
1990 - डफी वाल्र्फर्फ
1989 - डेविड पीपुल्स
1988 - रोबिन फ्रेमेन
1987 - जन हस्टन
1986 - स्टीव जोन्स
1985 - टीएम सिकेममेन
1984 - पल अजिंगर
1983 - विली वुड
1982 - डोनी हम्मन्ड
1981 पतन - रबर्ट थामसन, टिम ग्राहम
1981 स्प्रिंग - बिली ग्लिसन
1980 पतन - ब्रूस डगलस
1 99 1 वसन्त - जैक स्प्रेडलिन
1957 पतन - टम जोन्स
1977 वसन्त - टेरी मनी
1978 पतन - जिम थोरै, जोन फेक
1978 स्प्रिंग - व्रेन लुम
1977 Fall-Ed Fiori
1977 स्प्रिंग - फिल हानकॉक
1976 पतन - केथ फर्गस
1982 वसन्त - बब शारर, वुडी ब्ल्याकबर्न
1975 पतन - जेरी पिट
1975 वसन्त - जोई डल्स
1974 - फजी Zoeller
1973 - बेन क्रेन्सा
1972 - लैरी स्लबुलफाइड, जॉन एडम्स
1971 - बोब जेंडर
1970 - रबर्ट बारबारोससा
1969फ्लो - डगग ओल्सन
1969वसन्त - बब ईस्टवुड
1968 स्प्रिंग - बब डिकसन
1967 - बॉबी कोले
1966 - हैरी टोस्कोानो
1965 - जॉन श्लेय
वेब क्लियर ट्राफल्समा हाम्रो प्राइमर हेर्नुहोस् कि योग्यता प्रणाली कसरी काम गर्दछ।
1931 राइडर कप: अमेरिका 9, ग्रेट ब्रिटेन 3
गोल्फमा छुट प्रायोजक छन्?
पीजीए टूर मा सबै-समय उत्तम 18-होल स्कोर: सबै उप-60 गोल
पीजीए टूर स्मारक टूर्नामेंट
अमेरिकी महिला ओपन विजेता
एलपीजीए कम्बोडिया पोर्टल्यान्ड क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट
5 सुपरस्टार महिला समाजशास्त्रीहरूले तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्छ
यी अनुचित बालबालिकाका खिलौनेहरू अनियमित रूपमा डराउँछन्
लोकभरी, मोर, ट्याबोस, र कानून बुझ्ने
एरिलेक्सिक्स राख्नुको लागि युवतीहरू सुख्खा एयर चित्रकारी हुँदा सुत्नका लागि सुझावहरू
सबै समयका सर्वश्रेष्ठ 20 किशोर टिभी नाटकहरू
"यो एक अद्भुत जीवन" र हामी कसरी बाँच्न सक्छौं
10 सबै भन्दा ठूलो ल्यान्डलाइन गरिएको देश
सर ईसाक न्यूटन
फ्रान्समा प्रसिद्ध आविष्कारहरू र जन्मदिन
अमेरिकी नौसेना: दक्षिण डकोटा-कक्षा (बीबी-49देखि बीबी-54)
नि: शुल्क ऊर्जा र रिसेप्शन स्पैन्टनेसिटी उदाहरण समस्या
एला बेकर: ग्रासेरोट्स नागरिक अधिकार आयोजक
कहाँ निःशुल्क कार्टून अनलाईन हेर्नुहोस्
बैंगनी धुआँ रसायन विज्ञान प्रदर्शन
परिभाषा र Didactic लेखन को उदाहरण
एक राष्ट्रीय बिक्री कर अमेरिका मा आय कर बदलन सक्छ?
ज्यामितीय Isomer परिभाषा (Cis-Trans Isomers)
अमेरिकामा मल्टीपेरियल मान्छेको बारेमा पाँच मिथकहरू
पेट को अन्नामी
के यहूदीहरूले शैतानमा विश्वास गर्छन्?
अमेरिकामा शीर्ष आर्ट स्कूलहरू
5 सबै भन्दा प्रभावशाली व्यावसायिक महिलाहरु सबै समय को सर्फ
किन धन्यवाद हो वर्ष को शुभ दिन (र अन्य तथ्यहरु)
चार शास्त्रीय तत्व